Facebook ပေါ်မှ ဗီဒီယိုကို ဖုန်းနဲ့ဒေါင်းမယ် ~ လေးဝတီ
Facebook ပေါ်မှ ဗီဒီယိုကို ဖုန်းနဲ့ဒေါင်းမယ်
5:50 AM Andriod App
အန်းဒရိုက်ဖုန်း အသုံးပြုသူ သူငယ်ချင်းများ အတွက် App လေးတစ်ခု ပြန်ည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။ App ရဲ့ အမည်လေးကတော့
FVD ဖြစ်ပါတယ်...။ ဘာလုပ်လို့ ရလဲဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်လေးကို ကြည့် လိုက်တာနဲ့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ.....။ FB ပေါ်မှ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလော့ ယူလို့ ရ App လေးပါ...။
1. အရင်ဆုံး App လေးကို ဒေါင်းလော့ယူပါ...။ မှာလဲ free ပေးထားပါတယ်။
2. မိမိ ဖုန်းမှာ သွင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။
3. FB App မှာ မိမိ အကောင့်နှင့်ဝင်ပြီး...မိမိဒေါင်းလိုသော FB ပေါ်မှ ဗီဒီယိုကို ရှာလိုက်ပါ.....။ တွေ့ပြီဆိုရင် Play ကို နှိုက်လိုက်ပါ။ FVD App လေး နဲ့ ဖွင့်မလားလို့ မေးလာပါလိမ့်မယ်....။ FVD ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ DOWNLOAD ဆိုတာလေးကို နှိုက်ပေးလိုက်ပါ...။
FB ပေါ်မှ ဗီဒီယိုလေးကို ဒေါင်းလော့ ဆွဲနေတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
DOWLOAD ဆွဲတာ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ....SD ကဒ်ထဲက Xvideo ဆိုတဲ့ Floder လေးမှာ မိမိဒေါင်းလိုက်သော ဗီဒီယိုလေးကို သိမ်းဆည်းထားတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ.....။
လိုအပ်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ......။
ဘူးရေမျက်ရွာဆိုဒ်လေးမှ Post အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Facebook စာမျက်နှာပေါ်က ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဘူးရေမျက်ရွာ Facebook Fan Page လေးကို Like လုပ်ပေးပါနော်.... အားလုံးသော သူငယ်ချင်းများကို ချစ်ခင်လေးစားလျှက်....။
ကျနော်သည် ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်လျှင် အခြေခံ သင်တန်းတောင် တက်ခွင့်မရခဲ့သူပါ...မိမိကိုယ်ကို ကိုယ် Self-Study လုပ်နေရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည် အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် သင်တန်းတက်ခွင့်မရခဲ့သူတွေ အတွက် အနည်းငယ်မျှ အသုံးတည့်မည်ဆိုပါက ကျေနပ်နေသူတစ်ယောက်ပါ...။
Hover Effect To Authors Comments On Blogger
Step 1. In your Blogger dashboard click > Design > Edit Html > Tick The Expand Widget Templates Box : Step 2. Find the follow...
အန်းဒရိုက်ဖုန်း အသုံးပြုသူ သူငယ်ချင်းများ အတွက် App လေးတစ်ခု ပြန်ည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။ App ရဲ့ အမည်လေးကတော့ FVD ဖြစ်ပါတယ်...။ ဘာလုပ်လို့ ရ...
Animated recent post widget ထည့်နည်း
အစမ်းရေးကြည့်ခြင်း TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT HERE TEXT H...
How To Add Slide Out Navigation Menu In Blogger
Blogger Dashboard --> Design --> Edit HTML သွားပါ။ မိမိရဲ့ Template ကို Backup လပ်ထားပေးပါ။ Expand Widget Templates မှာ အမှန်မှတ...
post တဲ့ အခါမှာ စာပိုဒ်လေးတွေ ပုံလေးလေးတွေကို Hide လုပ်ပြီးရေး ကြမယ်
၁။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ကုဒ်လေးတွေကို Design>>Template Designer>>Advenced>>Add CSS ကိုသွားလိုက်ပါ။ ၂။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ က...
ဘလော့ဂါ Post မှာ ပုံလေးတွေလျှို့တင်နည်
မိမိရဲ့ post မှာ screen shot ပုံလေးတွေဖြစ်ဖြစ် မိမိတင်ချင်တဲ့ ဘယ်ပုံဖြစ်ဖြစ် မိမိရေးသားထားတဲ့ infomation လေးကိုဖတ်ပြီးမှ ပုံလေးကို လျှို့ဝှ...
Highlighting and customizing author comments differently from visitor comments isavery important step that you must take as soon as poss...
စာဖတ်သူများ မိမိ ဘလော့အဟောင်းကို ၀င်ရောက်ဖတ်နေချိန်မှာ မိမိပြုလုပ်ထားသော ဘလော့ အသစ်ကို ၀င်ရောက် ဖတ်စေချင် ၀င်ရောက်ရောက်စေချင်လျှင် အောက်ပါ...
Mozila Firefox,Interent Explorer, Goolge Chrome တိုထက် အဆပေါင်းများစွာ မြန်တဲ့ browser လေးတစ်ခု ပေါ်လာပါပြီ။ ကျနော် စမ်းသုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေတ...
Andriod App (2)
The Myanmar's Android
Android OS4ကို Laptop မှာ တင်သုံးခြင်း
Copyright © 2013 လေးဝတီ | Powered by Blogger